Izindaba ze-Android 6.0 Marshmallow, ukwesekwa kwezigxivizo zeminwe | Izindaba zamagajethi
Yini okusha in Android 6.0 Marshmallow, support fingerprint
U-Xavi Carrasco | | Android, I-Telephony
Ukusekelwa kweminwe ye-Android 6.0 Marshamallow kungenye yezinto ezintsha ezilindelwe kakhulu zohlelo olusha lweGoogleNgemuva kokukhiqizwa kwabakhiqizi abaningana, kufaka phakathi i-Samsung kwi-Galaxy S5 yayo naku-S6, lokhu kusebenza sekuyinto efunwa kakhulu ngabasebenzisi.
Iningi labakhiqizi bebevele bejoyina lolu hlelo ngaphambi kokuthi kuvele uhlelo olusha lwe-Android futhi baqala ukufaka izinto ezidingekayo ukwenza lo msebenzi ezingcingweni zabo. Abakhiqizi baphinde bathuthukisa izingqimba zesoftware ukusebenzisa umsebenzi omusha wokubona izigxivizo zeminwe., kepha ngokufika kweMarshmallow, lokhu kuyisibopho iGoogle esizenzela sona kusukela manje kuqhubeke.
1 Ukusebenza kokusekelwa kwezigxivizo zeminwe.
2 Ngeke siphinde sikhumbule iphasiwedi futhi?
3 Izindaba eziningi ku-Android 6.0 Marshmallow
Ukusebenza kokusekelwa kwezigxivizo zeminwe.
Ukusebenza kokuqala i-Google esinikeza kona ngosizo lwayo olusha ikakhulukazi okuthathu, ukuvula, i-API ezosetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza, nokuthengwa ku-Google Play Isitolo, yize ngokuzayo sizothola izindlela ezintsha zokusebenzisa lobu buchwepheshe.
Iyavula Kuze kube manje bekuyinzuzo enkulu yokuba nesifundi sezigxivizo zeminwe futhi kusivumela ukuthi sikwazi ukufinyelela ngokushesha kokuqukethwe kwesiginali yethu ngaphandle kokudweba iphethini noma ukufaka iphasiwedi noma iphini. Ukusetshenziswa kwephethini noma iphasiwedi kusanconywa kakhulu ngokuhlanganiswa nenzwa yeminwe
I-Android izogcina izigxivizo zeminwe yethu ukuze ukuthenga ku-Google Play Isitolo zikhululekile kithi ukuthi sikwenze, kubalulekile kuGoogle ukuthi yonke into ilula kakhulu futhi iphephe lapho sithenga ku-Google Play Isitolo, ngoba lesi sitolo sohlelo lokusebenza singenye yemithombo eyinhloko yezimali yenkampani.
La I-API yonjiniyela kungenye yezinto ezintsha ezenziwayo futhi ngokuqinisekile okubaluleke kakhulu, futhi lokho ukuthi uGoolge ulungiselele isikhombimsebenzisi sokuthuthuka ukuze bonke abadali bezinhlelo zokusebenza bakwazi ukufinyelela futhi basebenzise imisebenzi yokuphepha yeminwe, kuvule ubukhulu obusha bayo yonke i-App edinga ukuqinisekiswa.
Ngeke siphinde sikhumbule iphasiwedi futhi?
Sisekhona isikhathi salokhu, nangesikhathi esifushane iphasiwedi ayisoze yathathelwa indawo ngokuphelele inzwa yebhayomethrikhi yalezi zimpawu njengoba izigxivizo zeminwe yethu zingathikamezeka okwesikhashana noma zilimale unomphela, futhi sizodinga indlela yendabuko yokuqinisekisa ubunikazi bethu.
Cabanga ukuthi ukhiye awukho kubuchwepheshe kuphela kepha kukusetshenziswa kwawo, ngakho-ke izindlela ezintsha zokuqinisekisa ubunikazi bethu zizoqhubeka ukubonakala ziphephe kakhudlwana, inokwethenjelwa futhi inezinqubo eziningi zokuqinisekisa. Kepha lobu buchwepheshe, obabususelwa kumabhayisikobho bufakwa kumapaneli eminyango emikhulu yezikhali ezisezindlunkulu zezinkampani ezinkulu, manje sebuhlanganisiwe kuma-smartphones ethu futhi sibusebenzisa nsuku zonke.
Izindaba eziningi ku-Android 6.0 Marshmallow
Izindaba ze-Android 6.0 Marshmallow, Manje kuThepha
Yini okusha Android 6.0 Marshmallow, Storage Expandable
Yini okusha in Android 6.0 Marshmallow, Doze
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » Yini okusha in Android 6.0 Marshmallow, support fingerprint
sonia maroto kusho
Sawubona, inothi lami le-4 lisanda kuvuselelwa ku-Android 6.0 futhi nginenkinga yokukwazi ukuvula ukuvulwa kwesikrini ngeminwe yeminwe. Sengivele ngiqoshwe iminwe yami yeminwe, kepha uma ngiyobeka leyo lokhi ingicela enye iphasiwedi futhi uma ngizama ingitshela, ngiyaxolisa, zama futhi. Futhi ayikho indlela, beka leyo engangivumeli.
Phendula ku-sonia maroto
Sengikwazile ukukulungisa kepha angiyitholi indlela yokususa amazwana, ngiyaxolisa futhi ngiyabonga 😉 iphutha lami
URobin Crusader kusho
Sawubona Sonia. Ungaphawula ngokuthi uyixazulule kanjani inkinga ye-password ehlukile? Nginenkinga efanayo. Ngiyabonga
Phendula uRobin Cruzado
UMiguel Angel de Juan kusho
Kuyenzeka kimi futhi uma othile esazi isisombululo? Ngiyabonga.
Phendula uMiguel Angel de Juan
Ngine-Xperia z3 kepha angitholi ukuthi ngingawenza kanjani lo msebenzi, ngabe othile angangisiza?
U-Eduardo Nava kusho
Umbuzo omkhulu enginawo ukuthi ukusekelwa kwezigxivizo zeminwe kumele kuhlanganiswe ne-Hardware noma cha, ngokuba ne-Android marshmallow ??? : d
Phendula u-Eduardo Nava
Imikhuba emibi engu-6 nge-smartphone yakho okufanele uyiqede njengamanje
Izizathu ezi-5 zokuthi kungani i-HTC One A9 ingcono kune-iPhone 6S